Sele siwazi umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3 | I-Androidsis
Ityhile umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3
UXiaomi ubonise inani elikhulu leefowuni kwezi nyanga zidlulileyo. Nangona ngaphakathi kwikhathalogu yenkampani yaseTshayina sisenayo imodeli ezayo, yintoni iXiaomi Mi Mix 3. Isiphelo esiphakamileyo sophawu luye lwavuza kancinci kancinci kwiinyanga ezidlulileyo, enkosi koku siyazi ngakumbi ngalo. Ngoku, umhla wokufayilwa kwakhe utyhiliwe.
Umhla eyayiza kufika ngawo le Xiaomi Mi Mix 3 yayiyimfihlakalo. Kodwa ngenethiwekhi yoluntu yaseTshayina u-Weibo kubonakala ngathi sinolwazi ngakumbi ngayo. Akubonakali ngathi kufuneka silinde ixesha elide ukuba ifike.
Kumfanekiso olayishwe kwi-Weibo, kuyatyhilwa ukuba Umhla wokubonisa wale Xiaomi Mi Mix 3 ingangowama-15 ku-Okthobha. Ke ngeentsuku nje ezili-11 le fowuni iza kuziswa ngokusemthethweni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina siza kufika ngeentsuku ezimbalwa.
Kwifowuni, idatha eninzi iyaqhubeka nokufika, nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto iqinisekisiweyo. Kukho amarhe okuba le fowuni yayiya kuba ne-5G. Ukongeza, kuthiwa iya kuza neqhosha elizinikeleyo kumncedisi okrelekrele.
Kodwa inkampani ayithethi kwanto ngala marhe malunga neXiaomi Mi Mix 3. Iya kuba yenye yeefowuni zokugqibela eziboniswa ngumenzi kulo nyaka, ngokuqinisekileyo ngowokugqibela kwelona candelo liphezulu. Ke kuninzi okulindelweyo kuyo.
Nangona iza ngenyanga enzima. Kuba ngo-Okthobha iintetho zeefowuni ezininzi zisilindile, njengeGoogle Pixel 3 okanye iHuawei Mate 20. Kolu luhlu ngoku kongezwe iXiaomi Mi Mix 3, kunye nomsitho ngo-Okthobha u-15 e-China. Siza kuqaphela ulwazi oluthe kratya emnxebeni kwezi veki zizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ityhile umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3
Zithini iikhowudi eziyimfihlo kwi-Android
Owona myalezo ulula nangoko kunye neendaba zosasazo kwezentlalo kwiVenkile yokudlala